kbs — Thu, 08/19/2010 - 18:49
उनीले यहाँ आएर एउटा प्रश्न छोडेर गएकी छिन। एउटी आमाले घर एक्लै समाल्न सक्छिन, तर पुरै घर मिलेर पनि एउटी आमालाई किन सम्हाल्न सक्दैनन्? आखिर आमाको जीवनमा साँझको उज्यालोको किन भाग्य हुँदैन ? तर आमाले आफ्ना बच्चाहरूको जीवनको प्रत्येक पहरमा उज्यालो बनाउनको लागि आफ्नो उमेरभर आंधीसँग लड्दै गरिन, भोक, प्यास, अँध्यारो सबैसँग लड्दै गरिन! आज आमाको सहाराको किन माने हुँदैन? जब आमाले छोडेर टाढा जान्छिन तब आमाको सम्झना धेरै आउछ !...
आमा आमा हुन् ...! आमाको ठाउँ कसैले पनि लिन सक्दैन!...